Korintofo I 6 NA-TWI - Nsamena wo nua - Sɛ akasakasa ba onua - Bible Gateway
Korintofo I 5Korintofo I 7
Korintofo I 6 Nkwa Asem (NA-TWI)
6 Sɛ akasakasa ba onua ne onua ntam a, adɛn nti na mokɔ abosonsomfo atemmufo anim ma wobu mo atɛn bere a anka ɛsɛ sɛ moma Onyankopɔn nkurɔfo siesie mo ntam? 2 Munnim sɛ Onyankopɔn nkurɔfo na wobebu wiase atɛn? Na sɛ, ɛsɛ sɛ mubu wiase atɛn a, morentumi mmu nsɛm nketenkete atɛn? 3 Munnim sɛ yebebu abɔfo atɛn? Mpɛn ahe na yemmu asetena mu nneɛma atɛn? 4 Na sɛ nsɛm a ɛte saa ba a, nnipa a wonni dibea wɔ asafo no mu na mobɛma wɔasiesie? 5 Ɛyɛ animguase ma mo! Minim yiye sɛ ɛnyɛ dɛn ara a, onyansafo baako bi wɔ mo mu a obetumi adi onua ne onua ntam asɛm. 6 Ɛsɛ sɛ wɔfa saa kwan yi so no, onua de onua kɔ asennii ma wɔn a wonni gyidi di, bua asɛm no.